Mampiasa Skype miaraka amin'ireo zafikelin'ny taona rehetra
Skype miaraka amin'ireo zafikelin'ny taona rehetra
Programa VoIP Avelao hiresaka, hirahira, hamaky, haneho sy hizara
Tahaka ny fitomboan'ny fomba fifandraisanao amin'ny zafikelinao, toy izany koa ny fomba ampiasanao Skype. Saika ny zavatra rehetra ataonao amin'ny zafikelinao manokana dia mety ho azo ampiasaina amin'ny video chat amin'ny alàlan'ny Skype. Afaka mizara fotoana manokana miaraka amin'ny zafikelinao ianao rehefa tsy afaka ny ho ao anatin'ny olona ianao.
Raha toa ianao ka vaovao amin'ny fiantsoana video dia vakio momba ny fametrahana ny Skype . Rehefa tafapetraka ianao dia andramo ireto paikady ireto. Hahita zavatra betsaka kokoa ianao raha mahatsapa ho mahazo aina kokoa amin'ny antso an-tariby.
Fomba hafa amin'ny Skype
Maro ireo programa VoIP (Voice over Internet Protocol) sy ny apps ankoatra Skype. Ireo ray aman-drenibe izay mampiasa vokatra avy amin'i Apple dia mety haniry ny hanandrana FaceTime amin'ny antso an-tariby miaraka amin'ireo zafikely . Ireo fitsipika voalaza ato amin'ity lahatsoratra ity dia ampiharina amin'ny rehetra.
Mampiasa Skype miaraka amin'ny zaza
Amin'ny voalohany, mampiasa Skype ianao mba hijery ireo zafikelinao. Haheno ny feony sy hitomany ary feo hafa ianao. Raha nandefa lahatsoratra akanjo manokana ianao dia avelan'i Skype hahita ny zafikelinao manao azy io alohan'ny hamoahana azy. Ho tianao koa ny hijery ny ray aman-dreninao sy ny iray tam-po aminao, raha misy mpiray tam-po aminao, mifandray amin'ny zaza.
Mampiasa Skype miaraka amin'ny ankizy
Ny fahafinaretana maro toy ny fijerena ireo zafikelinao, dia mbola ho faly kokoa ianao rehefa tonga ho an'ny ankizy izy ireo ary afaka mandray anjara amin'ny antso an-tariby. Manorà fomba fanao mahazatra hiarahabana azy ireo ary ataovy veloma. Ny fanorohana oroka na fametrahana tanana eo amin'ny efijery dia fihetsika manan-danja, indrindra rehefa mifangaro amin'ny fiarahabana amin'ny teny am-bava. Avelao izy ireo hampiseho anao kilalao manokana, boky na akanjo. Ireo ankizy zokiolona dia hankafy izany raha mihira ho azy ireo, indrindra raha mifidy hira miaraka amin'ny fihetsika ianao, toy ny "Itsy Bitsy Spider" na "Teopy kely aho." Fihetseham-pandeha izay mampifamadiboka anao dia mahafinaritra ihany koa. Fantaro ny fisainan'ny ankizilahy kely, na izany aza. Matetika izy ireo no hiditra sy handao ny "sary" imbetsaka mandritra ny video chat. Manome fahafahana anao hiresaka amin'ny ray aman-dreny izany. Raha toa ka efa eo am-pelatanan'ny ray aman-dreny ny ray aman-dreniny, dia mety ho voatery "mandika" azy ireo indraindray. Ry ray aman-dreny izay tsy mahita ny zafikeliny matetika dia mety tsy ho variana amin'ny fahatakarana ny kabariny, fa ny Skyping dia afaka manampy.
Mifandray amin'ny zazalahy
Rehefa miditra ny ambaratonga voalohany ny zafikelinao ary manomboka mianatra litera sy tarehimarika, avelao izy ireo hizara ny fahalalany miaraka aminao, fa aza manery azy ireo hanao izany. Tsy misy olona te hohadinoina. Ho faly koa izy ireo hampiseho aminao ireo tricks afaka azony atao, toy ny fitsangatsanganana, fitsangatsanganana ary fisambotra baolina. Raha toa ka misy hira manokana na feon-jatony izay nankafizinao talohan'izay, dia aza mieritreritra fa efa naniry azy ireo izy. Raha mandefa fanomezana na fanomezana fanafody ianao, angamba ny ray aman-dreny no hamonjy azy ary avelao hijery azy ireo rehefa manokatra izany. Mahafinaritra koa ny mahita azy manao akanjo izay novidinao na nilalaovanao tamin'ny kilalao izay tonga avy aminao. Tohizo ny "sonia" ary "asio" amin'ny fomba izay efa namboarinao.
Skype dia ahafahanao manana fahafinaretana goavana amin'ny fijoroana vavolombelona amin'ny zafikelinao izay mianatra mamaky teny. Mety ho fohy ny fifantohan'izy ireo, fa hidera ny ezaka ataony. Raha manan-boky ny ankizilahy iray, mividia kopia iray mba hahafahanao mamaky teny, na mamaky pejy miara-mamaky. Haniry hahalala ny anaran'ireo mpampianatra sy namana koa ianao mba hahafahanao manaraka ny resaka ataon'izy ireo. Manaova fanamarihana raha tsy maintsy ianao! Amporisiho ireo zafikelinao mba hampiseho aminao ny zavakanto, ny tetikasa ary ny kilalao vaovao.
Don 't Drop the Ball with Tweens
Rehefa miditra an-jatony na zato taona ireo zafikely, dia mety tsy liana amin'ny fifandraisana izy ireo. Miankina aminao ny lohahevitra sasantsasany ao an-tsainao. Ny tononkalo taloha dia mety te hifandray amin'ny alàlan'ny SMS. Izany no antony tokony hianaran'ireo ray aman-dreny amin'ny soratra. Ny lahatsary lahatsary dia mety ho fanampiana tsara ho an'ireo fifandraisana ireo, na izany aza. Ny zafikelinao dia afaka maneho anao trophy iray, modely vaovao iray na mampiditra anao amin'ny namana. Eritrereto izay azonao zaraina amin'ny fiafaranao. Asehoy ny fanjaitra iray izay efa vitanao, na tetikasa fanavaozana.
Miezaha mifandray amin'ny zatovo
Ny vaovao tsara momba ny zafikelinao dia mety ho tena mahazo aina amin'ny teknolojia isan-karazany izy ireo. Ny vaovao ratsy dia tsy mahalana izy ireo ao an-trano! Raha azonao atao amin'ny Skype izy ireo, dia mety hivezivezy ao an-tsainy izy ireo toy ny ankizilahy mpiara-mitory aminy, matetika miaraka amin'ny namana iray na roa. Raha azonao an-tserasera izany, dia manampy amin'ny fananana lohahevitra an-tsaina mialoha, toy ny sarimihetsika vaovao iray fantatrao fa nahita na ny fanatontosana ny ekipa tiany indrindra. Raha miaraka aminy ao amin'ny Facebook ianao, dia mety haka zavatra betsaka momba ny asany izay azonao ampiasaina amin'ny resaka fanombohana, ary mety hihaona amin'ny maro amin'ireo namany an-tserasera. Tanora maro no manana ny ordinaterany manokana, ary mety ho afaka hifampiresaka manokana amin'izy ireo ianao, fa aza mampirisika azy ireo ho "misakafo" amin'ireo mpikambana hafa ao amin'ny fianakaviana. Ireo lohahevitra tsy misy fetrany ihany koa dia tsy voafetra an-tserasera. Omeo fahafahana izy ireo hizara ny fahombiazany, fa aza manery azy ireo amin'ny lohahevitra toy ny marika sy drafitra ho an'ny ho avy.
Aza maneho hevitra momba ny efitrano misimisy ihany koa!
Ireo tanora efa bevohoka tanora
Ny ankamaroan'ny zavatra miasa miaraka amin'ny zatovo dia miara-miasa amin'ireo zafikelinao tanora. Raha manana zafikely any amin'ny oniversite ianao dia afaka mahita efitrano fandriam-bahiny ary mihaona amin'ny mpiray efitra aminao. Taty aoriana dia afaka mahita trano voalohany, biby fiompy, fiarakodia ary amboahaolo ianao. Aoka ianao hafana fo sy tsy hitsara. Raha ny tena izy, ireo no olona mety hampiakatra anao amin'ny sata bevohoka! Misy antony marim-pototra ve ny mifandray akaiky sy mifankatia?
Don # Tadidio ireo ray aman-dreny!
Raha toa ianao ka maneso amin'ny zafikely, dia aza adino ny mampiseho fahalianana amin'ny ray aman-dreninao. Ny fangatahana azy ireo aloha dia iray amin'ireo fomba hanatsarana ny fifandraisanao amin'ny zanakao efa lehibe.
Ny 5 Best Wireless IP Phones mba hividy amin'ny 2018
Ny serivisy SkypeIn
Feo momba ny tsy fahampian'ny IP
Voambolana ho an'ny VoIP ve ny raharaham-barotrao?
Fandaniana miafina amin'ny serivisy VoIP
Live: A Complete Tour
Fomba hanampiana endrika miaraka amin'i KompoZer
Inona no niafara tamin'ny efitra fisakafoana?
Ny Torolàlana ho an'ny Fitaovana Quick Reference to Web Research
Lisitry ny fampisehoana lehibe sy Visual Effects Studios
Fampidirana ny fampandrenesana Port
Easter eCards, mahafinaritra ho anao ao amin'ny Facebook
Karazana fifandraisana amin'ny tambajotra
Inona no tokony ho fantatrao momba ny sanda misy
Ahoana ny fomba hanadiovana an'i Windows XP
Esory ny ASCII Character # 127 amin'ny Excel
Mail AIM Mail sy AOL Mail Email Attachment Size Limit
Bilaogy Business 10 Manomeza hevitra mba hanomezana orinasa ny orinasanao
Call of Duty World at Map Map Pack 3
Fitaovam-piteny miisa valo avo valo amin'ny Wii
Tari-dàlana hametrahana sy hampiasa ny Cairo Dock